Trump ayaa wacad ku maray inuusan shacabka ku amri doonin in ay xirtaan af-xirka looga hortago… – Hagaag.com
Trump ayaa wacad ku maray inuusan shacabka ku amri doonin in ay xirtaan af-xirka looga hortago…
Posted on 18 Luulyo 2020 by Admin in World // 0 Comments
Hadalkiisan ayaa ku soo beegmaya xilli madaxa Cudurada Faafafa ee dalka Dr. Anthony Fauci uu madaxda dowladda iyo kuwa gobollada ku booriyay iney shacabka ku khasbaan xirashada maaskarada.
Dr. Fauci ayaa intaasi ku daray inay aad muhim u tahay xirashada maaskarada wajiga ayna khasab tahay in qofkastaa uu isticmaalo. Dalka Mareykanka waxaa aad loo siyaasadeeyay xirashada maaskarada wajiga.
Hase yeeshee wereysi uu siiyay warbaahinta Fox News, ayuu Trump ku sheegay inuusan marnaba ku raacsanayn in dadka khasab looga dhigo xirashada maaskarada sabatoo ah waxa uu yiri dadku waxay u baahan yihiin xornimo.
Labada gobol ee ugu dadka badan Mareykanka waa California iyo Texas, in ka badan 7 milyan oo caruur ah oo ku tiirsan waxbashada iskuulada dowladda ayaanan toddobaadyada soo socda dib ugu noqon doonin waxbarshadoodii.
Gobolka Texas ayaa qorsheynaya in ilaa bisha November ardayda la siiyo casharada dhanka online-ka ah.